Shil geystay khasaaro dhimasho & dhaawac ah oo ka dhacay Kenya - Wararka Maanta:... - Wararka Maanta
Shil geystay khasaaro dhimasho & dhaawac ah oo ka dhacay Kenya – Wararka Maanta:…
Shilka oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa waxaa uu ka dhacay ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta gar ahaan aagga loo yaqaano Makupa ee dalka Kenya.
Shilka ayaa sida la sheegay waxaa uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaadiid midka dadweynaha ah oo fariin goosta kadibna wadada ka baxay iyo mid nooca xamuulka qaado ah.
Inta la xaqiijiyay Shilka ayaa waxaa ku dhintay Saddex Ruux halka 5 Ruux ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la geeyay Magalada Mombasa ee dalka Kenya si halkaasi loogu daaweeyo.
Wararka Maanta : Covid-19: Museveni oo Ka Fiirsanayo Nooca Tallaal ee uu Qaadanayo
Gaariga nooca dadweynaha ee loo yaqaano Matuutaha ee shilka galay ayaa ka tegay dhanka degmada Makupa, waxaana uu ku wajahnaa deegaanaka Baarlamaneedka Changamwe.
Taliyaha Ciidamada taraafikada ee gobolka xeebta Peter Maina ayaa warbaahinta u sheegay in ay ciidamada wadaan barotaan dheerri ah oo la xiriira shilka, isla markaana ay xiran yihiin darawaliinta labada Gaari.
Awooda Militeriga Kenya, Isbar-bardhiga Somaliya |Siraha Militeriga|
Deg Deg: DF oo Jawaab Culus bixisay, Kenya oo isdhiibtay & Xogta Askartii…
Kulankii u dhexeeyay xulalka Denmarka iyo Finland ayaa gabi ahaan la baajiyay kadib markii uu xiddiga khadka dhexe ee Christian Eriksen ku dhex suuxay garoonka dhexdiisa ciyaarta oo socota.
Xiddiga Inter Milan ayaa ku dhex suuxay ciyaarta oo maraysa daqiqiadii 42-aad ee qaybta hore kadib markii uu kubad ka helay xiddig ay isku xul yihiin laakiin xiddiga ayaa horay-horay u dhacay iyada oo ayna cidna u dhawayn.
Xiddiga Christian Eriksen ayaa xitaa lagu xidhay qalabka neefta soo saara kadib markii uu neefsan waayay taas oo keentay in ay xiddigaha labada xul ooyaan.
Wararka Maanta : Arrimo maanta ka dhacay garoonka Muqdisho oo muujiyey sida loo kala aamin baxay
Warar ayaa xitaa sheegaya in laga shakisanyahay in uu xiddigu noolyahay marka loo eego in wax dhaqaaq ah laga laayahay ilaa haatan
Previous articleMaamulka Hir-Shabeelle oo ka hadlay Colaad Beeleedyada
Dowladda Koonfur Afrika oo ceyrisay diblumaasiyiin u dhashay…
Dowladda Koofur Afrika ayaa diblumaasiyiinta u dhashay dalka Malawi ee ku sugan dalkeeda u qabatay iney 72 saac gudahood dalka kaga baxaan.
Sababta ayaa lagu sheegay in diblumaasiyiintaan qaarkood lagu helay dembiyo ah iney ku lug lahaayeen ka ganacsiga daroogada aan canshuurta laga qaadin ee Khamriga iyo Alkahoolka, oo dalkaasi laga mamnuucay.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Koofur Afrika ayaa sheegay iney go’aankaan qaateen kadib maalmo ay baaritaanno wadeen, waxa uuna sidoo kale xusay in diblumaasiyiinta iyo qoysaskoodab dalka isaga baxaan.
Wararka Maanta : Taliska Yuhuudda oo Xabsiga u Taxaabay Boqollaal Kamid ah Carruurta Reer...
Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Malawi ayaa lagu sheegay in tallaabadaan ay qaaday Pretoria ay tahay mid shalayto ah, islamarkaana aan munaasabad ku aheyn qiyamadka Diblumaasiyiinta Malawi.
Previous articleDHAGEYSO:- Warka Habeen ee Radio Risaala12-06-2021
LONDON(Wararka Maanta)-Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku boorinaya wadamada reer galbeedka inay ka hortagaan saameynta sii kordheysa ee Shiinaha isagoo ka hadlay maalinta labaad ee shirka G7, sida uu sheegay mid kamid ah kaliyeyaashiisa.
Madaxweyne Biden ayaa la filayaa in uu ku baaqo isbahaysi cusub oo ka hortagaya dhaqaalaha ay Beijing ku bixinayso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka soo koraya.
Mareykanka iyo xulafadiisa waxay Shiinaha ku eedeynayaan shaqo qasab iyo xadgudubyo kale oo xuquuqda aadanaha ah oo ka dhacay gobolka Xinjiang.
Horaantii sanadkan, Mareykanka, Midowga Yurub, Boqortooyada Ingiriiska iyo Canada waxay soo bandhigeen cunaqabateyn in la saaro Shiinaha.
Cunaqabateynta, oo ay ku jiraan xayiraadaha safarka iyo xannibaadda hantida, ayaa lala beegsaday saraakiil sarsare oo ku sugan Xinjiang kuwaas oo lagu eedeeyay xadgudubyo culus oo xuquuqda aadanaha ah oo ka dhan ah Muslimiinta Uyghur.
In ka badan hal milyan oo Muslimiinta Uyghurs iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay ayaa la qiyaasayaa in lagu xiray xeryo ku yaal gobolka waqooyi-galbeed.
Wararka Maanta : Ciidamada Itoobiya iyo Eritrea oo Lagu Eedeeyay Afduubka Boqollaal...
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la kulmay Wakiilada Beesha…
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Saaxibada Beesha Caalamka ee Soomaaliya oo uu horkacaayo Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey James Swan.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay Arimaha Doorashooyinka iyo Mashaariicda Hormarineed ee ka socda Deegaanada Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa uga mahad celiyay Wakiilada Beesha Caalamka kaalintooda ku aadan dowladnimada Soomaaliya iyo taageerada ay siiyaan.
Wararka Maanta : Khasaaro ka dhashay Gantaalo lagu garaacay warshado Shidaal - Wararka Maanta: Somali News Online